८ असोज २०७७, बिहीबार
२०७६ भदौ १४ शनिबार ०६:४५:००
आफ्नै स्वास्नीको हत्याको आरोपमा पुलिसले हथकडी लगाएर मुन्ट्याउँदै लगेकोे चिरपरिचित ग्राहक यत्ति चाँडै रेस्टुराँँमा फर्केला भनेर पटक्कै सोचेकी थिइनँ मैले ।
उसलाई देख्नेबित्तिकै अन्योलमा उदाङ्गिएका मेरा आखाँहरू बन्द हुनै मानेनन् । झन् ग्राहकको एकतमासको चम्किलो आँखाले पनि मलाई नै हेरेको थाहा पाएपछि त मेरो पुराका पूरा मेरुदण्ड नै सिरिङ्गियो । मैले आफ्नो मुटु ढक्क बजेको आफैंले सुनेँ र धड्कन बढेसँगै तेजीका साथ रगत सरर्र शरीरभरि फैलिएको अनुभव पनि गरेँ ।
ममा अलिकति केटोप्रति संशय थियो, अलिकति बितेका दिनका घटनाहरूप्रतिको उत्सुकता, अलिकति अप्रत्यासित आमनेसामने हुनुको डर लाग्दो रोमाञ्चकता पनि थियो । सबथोक अलिअलि मिसिएपछि केही पनि अलिअलि थिएन, समग्रमा सबथोक धेरै बनेको थियो जसले गर्दा आफैंलाई आफ्नो अनुहार निरीह बनेको झैं लाग्यो ।
मैले जबर्जस्ती सम्हालिएर केटोलाई माथिदेखि तलसम्म सर्सर्ती हेरेँ— दुई महिनाअघि पुलिसले हथकडी लगाएर घोक्राउँदै लगेको करिब ३० वर्षे केटोले अनुहारभरि दुई महिनाकै उमेरको दाह्रीजुङ्गा पनि थपेछ । करिबकरिब लट्टा परेको कपाल आँखै छोपिनेगरी लामो भैसकेको रहेछ । पहिला अलिअलि डिस्काउन्टसहित ८० केजी जत्तिको देखिन्थ्यो, अहिले दुब्लाएर करिब ६५ केजीको भएछ । आइरन नगरिएको उसको कपडाबाट लामो समयदेखि ननुहाएको जस्तो अमिलो गन्ध आइरहेको थियो । उसका दुवै जुत्ता हिलाम्य थिए, दायाँ जुत्ताको त फित्ता पनि खुकुलिएर फुस्किन खोज्दै थियो ।
नमीठो मुस्कानमा मैले ग्राहकको हैसियतमा उभिएको केटोको औपचारिक स्वागत गरेँ । केटो मेरो स्वागतको जवाफ नफर्काइ सीधै रेस्टुराँँको बायाँ कुनामा रहेको, सिसाको बार लगाइएको अक्सिजन पार्लरतिर गयो र आपूm पहिलेपहिले बस्ने गरेको, कलेजी रेग्जिनले मोरिएको लचकदार सोफामा थचारियो ।
मैले बुभेmँ, अब अक्सिजन मगाउँछ ।
म मानसिक द्वन्द्वकै बीचमा उसको अगाडि गएँ । ऊ निक्कै थकित देखिन्थ्यो । एकसरो आँखा जुधाएर सधैंझैं सरल बन्ने कोसिस गर्दै सोधेँ— “खबर नै नदिई धेरै दिन हराउनुभयो ।”
“हराउनलाई खबर दिनुपर्छ र ? टोलभरिका मान्छेको किन एउटै प्रश्न छ कुन्नि ?”
मान्छे अलि बदलिएको जस्तो देखिए पनि उसको आवाज भने केही पनि बदलिएको रहेनछ । सबै कुरा थाहा भए पनि केही थाहा नपाएकी जस्तै सोझी बन्न खोजेकी थिएँ, उसको चिसो प्रतिप्रश्नमा मलाई लज्जाबोध भयो । मुस्कानको पर्दाले लाज छोपेर सोधेँ— “के ल्याऊँ ? अक्सिजन ?”
उसले सहमतिमा टाउको हल्लायो ।
“कुन फ्लेभरको ल्याउँ ?”
उसले सुस्तरी भन्यो— “बिना फ्लेभरको । शुद्ध अक्सिजन ।”
“कति मिनेटको ?”
मैले तमाखुको हुक्काजस्तो आकारको, सिसाको कलात्मक जारमा अक्सिजन लगिदिएँ ।
उसले मेरो सहयोगमा जारमा जोडिएको, प्लास्टिकको अक्सिजन मास्क मुखमा लगायो र आरामसाथ सोफामा ढेस्सिएर आधा सुतेको–आधा बसेको पोजमा अक्सिजन लिन थाल्यो ।
ऊ रेस्टुराँँमा आएको थाहा पाएर म्यानेजर मेरो छेउमा आयो र उत्सुकताबस् सासैसासमा सोध्यो— “के भन्छ ?”
“केही भनेन, सीधै ४० मिनेटको अक्सिजन लिन सुरु ग¥यो । भन्ने कुरा भएपछि भन्ला नि !”
म्यानेजरसहित रेस्टुराँँका सबै स्टाफहरू तन्किईतन्किई उसले अक्सिजन लिँदै गरेको हेर्दैथिए ।
ग्राहक केटो केही समयअगाडि रेस्टुराँको अगाडि, सडकपारिको चारतल्ले रातोघरको भाडामा बस्न आइपुगेको थियो । ऊ दोस्रोतल्लाको फ्ल्याटमा भाडामा बस्थ्यो । त्यो घरको भुइँतल्लामा घरभित्र छिर्ने ढोका थियो र दुई सटरको ट्राभल एजेन्सी पनि थियो । पहिलो तल्लामा एजुकेसनल कन्सल्टेन्सी थियो । घरमालिक आफैं बस्ने गरेको तेस्रोतल्ला सधैं बन्द देखिन्थ्यो, घरमालिकको परिवार त्यहाँ नबसेर अन्तै कतै बस्थे । चौथोतल्ला पनि खाली थियो र झ्यालमा ‘कोठा भाडामा’ भन्ने सानो साइनबोर्ड राखिएको थियो, जसमा सम्पर्क फोन नम्बर पनि थियो ।
सडकपारिको रातोघरको दायाँबायाँ दुवैतिर अर्को टोलसम्म पुग्नेगरी सार्वजनिक ढलको मर्मतको लागि खाल्डो खनिएको थियो, जसले गर्दा पूरै टोल दुर्गन्धले पीडित थियो । निक्कै अगाडि ढलको काम सुरु भएको थियो, तर काम सम्पन्न हुन सकेको थिएन । सडकबाट पेटी हुँदै घरमा जानेहरूका लागि ठाउँठाउँमा सिमेन्टका ससाना स्ल्याबहरू राखिएका थिए, जसलाई पुलजस्तै प्रयोग गरेर बटुवाहरू सडक र पेटी ओहोरदोहोर गर्थे । खोलेर छाडिएको ढल पानी परेको बेला उचालिएर दिग्मिग् लाग्नेगरी सडकको माथिमाथिसम्म छ्याल्ब्याल् हुन्थ्यो, घाम लागेको बेला त सडकमा हिँड्नै वाक्वाकी लाग्नेगरी उत्पातैको दुर्गन्ध फैलिन्थ्यो । बतासले छड्के हानेको बेला त गन्ध रेस्टुराँँसम्म आइपुग्थ्यो, त्यही भएर केही दिनयता सडकपट्टिको झ्याल खोलिने गरिएको थिएन । टोलभरिका सबैको कामना यत्ति थियो कि, कमसेकम ढल छोप्ने काम चाँडै सम्पन्न होस् ।
हो, त्यही सडकपारिको सामुन्नेको रातोघरमा बसेको ऊ, प्रायः रेस्टुराँमा आइरहन्थ्यो र थरिथरिका सेवाहरु लिइरहन्थ्यो । रेस्टुराँ तेस्रोतल्लामा भएकाले ऊ बस्ने सामुन्नेको दुई झ्याले कोठाको भित्री भाग पर्दा नलगाउँदा स्पष्टसँग देखिन्थ्यो ।
ग्राहक सोफामा ढल्किएर आर्टिफिसियल अक्सिजनमा मस्त थियो, म हतारहतारमा ग्राहकको रेस्टुराँमा आएको पहिलो दिनदेखिको घटनाहरू फटाफट सम्झिन थालेँ ।
त्यो दिन रातको ठीक साढे नौ बजे, रेस्टुराँ बन्द गर्नुअघिको स्टाफ रिफ्रेसमेन्ट मिटिङ चल्दै थियो । म्यानेजर, म र अरू स्टाफहरू सधैंझैं कोकाकोला खाँदै दिनभरिको रेस्टुराँको सेवा, आम्दानी, ग्राहकलगायतका कुरा गर्दै थियौं ।
ठीक त्यति नै बेला ऊ पहिलोपल्ट रेस्टुराँमा छिरेको थियो । उसको साथमा एउटी केटी पनि थिई । सबैले एकसाथ देख्यौं, केटी सामान्य नेपाली वर्णकी थिई, न साह्रै राम्री न साह्रै नराम्री । ऊ रातो सलवारकुर्तामा थिई, सिउँदोमा एकधर्को सिन्दुर थियो । केटा भने नीलो जिन्स, प्याजी पोलो टिसर्ट र सेतो नाइकी स्पोर्ट सुजमा थियो ।
“आज बन्द भैसक्यो, अब भोलि बिहान आठ बजेमात्र ।” म्यानेजरले टाढैबाट जानकारी दियो ।
केटीलाई ढोकैमा छोडेर ऊ सबैजना भएको ठाउँमा आयो र आफ्नो हातको कालो ब्यान्डवाला घडी हेर्दै याचना ग¥यो— “हेर्नुस् न ढिलो भयो, आजै बिहे गरेर आएको । ऊः स्वास्नी पनि साथमै छे ।” उसले केटीतिर देखायो— “उता सडकपारिको ढल खनेको ठाउँमा, सीधा रातोघरमा दोस्रोतल्लामा कोठा छ, तर पकाउने केही सामान छैन, भाँडाकुडा छैन । केही जोरजाम गर्नै पाएको छैन । कोठामा पिउने पानीसमेत छैन ।”
उसले फरर्र यति चाँडै सबै कुरा भन्न सिध्यायो कि, कोही केही बोल्नै सकेनन् ।
“बिहानको खानापछि केही खाएको छैन । जे मिल्छ, प्लिज, केही खाना दिनुस्, केही पानी दिनुस् । जे सजिलो र छिटो हुन्छ, त्यही दिनुस् ।” उसले अनुरोध ग¥यो ।
सबैजनाले मुखामुख गरे । म्यानेजरले बोतलबाटै कोकाकोला खाँदै गरेको सेफलाई आँखा सन्कायो— “के भन्छस् ? छिटोगरी केही दिन सक्छस् भने दे क्यारे ?”
.“हेरुँ” सेफले पनि आँखैमा भन्यो र क्यास काउन्टरसँगै जोडिएको ढोकाबाट किचेनतिर पस्यो ।
म्यानेजरले टेबलतिर इशारा गर्दै नरम आवाजमा भन्यो— “बस्नुस् ।”
उसले स्वास्नीलाई बोलायो र एउटा टेबलमा बस्यो । दुवैजना कुन्नि केके खासखुस गर्न थाले ।
सेफले एकछिनमा आफ्नै हातले दुइटा प्लेटमा बाफ आउँदै गरेको चाउमिन लगेर उनीहरूको बीचमा राखिदियो— “भेज चाउमिन”
मैले पानी लगिदिएँ ।
दुवैले आधाआधा मात्रै चाउमिन सिध्याए ।
“बोतल पानी छ ? लैजान ।”
“चार बोतल दिनुस् ।”
मैले पानी दिएँ । दुवैजना दुईदुई बोतल मिनरल वाटर बोकेर रेस्टुराँबाट बाहिरिए ।
एकैछिनमा केटा फेरि आयो— “सिग्रेट पाकेट छ नि ?”
“छ, कुनचाहिँ ?” मैले सोधेँ ।
“भए मोर मेन्थल दिनुस् एक पाकेट ।”
मैले दिएँ, ऊ चुरोट खल्तीमा हालेर हिँड्यो ।
पारिपट्टि भनेको कहाँ रहेछ भनेर सबैजनाले गुटुटुटु दौडिएर रेस्टुराँको झ्यालको पर्दा थोरै उघारेर चियो ग¥यौं । उनीहरू साँच्ची नै सडकपारि पुगे । खनेर छाडिएको ढलमाथिको स्ल्याबको सानो पुल हुँदै दुवैजना अगाडिको रातो घरमा छिरे । एक छिनमा दोस्रोतल्लाको कोठाको बत्ती बल्यो ।
“हनिमुन पनि हेर्ने रहर छ कि जाने हो ?” एउटी स्टेवार्ड छिल्लिई— “जाउँ ढिलो भयो ।”
हामी सबै मुसुक्क मुस्कायौं र रेस्टुराँँ बन्द गरेर हिँड्यौं ।
भोलिपल्ट पहिलो ग्राहक बनेर, रातभरि सुत्न नपाएको जस्तो अनुहार लिएर त्यही केटा आयो, साढे आठ बजे । ऊ पछि अरु तीनजना पसे ब्रेकफास्टको लागि, फेरि अरु ग्राहक थपिए । किचेन, क्यास, स्टेवार्डिङ, सबै आआफ्ना ड्युटीमा तैनाथ छँदैथिए । रेस्टुराँ सधैंझैं लयमा हिँड्न थाल्यो ।
ऊ हिजोकै टेबलमा बस्यो, मेनु पल्टायो ।
रेस्टुराँको लागि नै डिजाइन गरिएको सेतो सर्ट, कालो बोटाई र कालो स्कर्टको युनिफर्ममा म उसको अगाडि गएँ— “के ल्याऊँ ?”
उसले मेरो छातिमा झुण्डाएको नेमट्याग पढ्यो र सोध्यो— “के के पाइन्छ ?”
“पाइने कुरा सबै मेनुमा छ ।” म उसको अगाडि उभिइरहेँ, ऊ जाँचको प्रश्नपत्र पढेझैं मेनु पढिरह्यो ।
उसले टोलाएको आँखाले हे¥यो, हिजो राति रेस्टुराँँबाट लगेको चुरोट निकाल्यो, सल्कायो । उसको आँखा घरिघरि मात्तिन्थ्यो र मेरो आधाभन्दा बढी खुलेको छातिमा टाँसिन्थ्यो । मलाई असजिलो लाग्यो र भनेँ— “हिजोमात्रै विहे गरेको भनेकी स्वास्नी छ होइन कोठामा ? आँखामा अलि अनुशासन ल्याउने कि ?”
“क्यै खराब छैन नियत । सम्म मैदानमा बसेको थुम्का होस् या कुनै चलायमान बस्तु, मान्छेको आँखा त्यता परिहाल्छ । तपाईंको आँखा कोही हेर्दैन, मस्कारा लगाउनु हेरिन्छ । ओठ त्यत्तिकै हेरिँदैन, लिपिस्टिक लगाउनुस् आँखा गइहाल्छ । मेरो पाइन्ट कोही हेर्दैन, अलिकति प्वाल परोस् त्यो ठाउँले सबैको आँखा तान्छ । यो प्रकृतिको नियम हो । कि त तपाईं आफ्नो युनिफर्म बदल्नुस्, कि मजस्ताका आँखाहरूलाई आफूमाथि चिप्लिन दिनुस् र गर्व गर्नुस् ।”
मलाई लाग्यो– हिजो भोको पेटमा खानाको लागि बिन्ती बिसाउने ऊ र आजको ऊमा निकै अन्तर थियो । एकै नजरमा चिनेँजस्तो लाग्छ, तर कति गाह्रो छ मान्छेलाई ठ्याक्कै चिन्न ! हिजो नरम बोल्ने मान्छे आज ज्याद्रो, आत्मविश्वासी, हुल्याहा र टेढो देखिन्थ्यो ।
उसले कन्टिनेन्टल ब्रेकफास्टमा आएको बटर र जामसहितको दुईवटा टोस्टब्रेड, डबल अण्डाको अमलेट र मिल्क कफी सोचपूर्ण मुद्रामा खायो र अर्को एउटा त्यही प्रकारको ब्रेकफास्ट र कफी तयार पार्न अह्रायो— “उसको लागि कोठामा लैजान्छु ।”
ब्रेकफास्ट तयार होउञ्जेल मलाई टेबलको अर्कोतर्फ बस्न भन्यो नानाथरि कुरा सोधिरह्यो र सुनाइ पनि रह्यो ।
“त्यो कुनामा सिसाले बारिएको के हो ?”
“अक्सिजन पार्लर । फरकफरक अक्सिजन पाइन्छ, मेनुमा छ । मान्छेहरू इच्छाअनुसारको अक्सिजन लिन्छन् र पे्रmस भएर जान्छन् ।”
“क्यास काउन्टरसँगैको दायाँ पित्तलको सिक्रीले बारिएको कुनामा के हो ?”
“त्यो बार एरिया हो, डिङ्क गर्नेहरू त्यहाँ बस्छन्, पिउँछन् र मन लागे चेस पनि खेल्छन् ।”
उसले कुरा मोड्यो— “अलि चाँडै भन्नुस् ब्रेकफास्ट ।”
“चाँडै नै हुन्छ । यहीँ आएर किन नखाएको ब्रेकफास्ट ? किन कोठामा लैजान लागेको ?” मैले सोधेँ ।
“अचानक बिरामी परी । हिजो राति यहाँबाट गएपछि म पहिला बाथरुममा पसेर नुहाईधुवाई गरेर निस्किएँ । ऊ पछि बाथरुम पसी । म बेड तानतुन गर्दै थिएँ । ऊ बाथरुमबाट बाहिर निस्किँदा रिँगटा लागेजस्तो भएर ढोकामा चिप्लिएर लडी । टाउको, कुहिनो, घुँडामा चोट लाग्यो । मैले बल्लबल्ल उचालेर खाटमा सुताएँ । करिब एक घण्टाजति त बेहोस नै भई । मध्यरातमा दुई घुट्को पानी खाई अनि तीनपटक त भोमिट नै गरी । कारण सोध्दा त ब्लड प्रेसरको औषधि खाने गरेको रे, बिहेको चक्करमा औषधि नखाएको दुईदिन भयो रे, अब खाऊ न त भन्दा ल्याएकै छैन पो भन्छे ! अब मध्यरातमा कहाँ खोज्न जानु औषधि ?”
“यो उमेरमा ब्लड प्रेसर ?”
“दुई वर्ष भैसकेको थियो रे ब्लड प्रेसरको औषधि खाने गरेको । मलाई हिजो रातिमात्र भनेकी । वंशाणुगत ब्लड प्रेसर रे । तीन वर्षअघि उसको बाउ बितेको त थाहा थियो, तर हिजै थाहा भयो ब्लड प्रेसर बढेर पो चेट भएको रे ।”
“सधैं खाने गरेको औषधि बिहे भन्दैमा किन छोड्नुप¥यो त ?”
“आकस्मिक रुपमा बिहा गरेर भागेका हौं वा भनुँ भागेर बिहा गरेका हौं । हामी नुवाकोटका हौं । सानैदेखि सँगै पढेका साथी । उनको बाबु नुवाकोटको बस व्यवसायी थिए । तीनवटा बस थियो । बाबु चेट भएपछि दाइले व्यवसाय सम्हाले र काका भन्ने गरेको बाबुको साथीसँग ऋण लिएर अरु दुईवटा बस थप्यो । योजनाअनुसार राम्रै चलिरहेको व्यवसाय नेपाल बन्द र नाकाबन्दीले चौपट भएछ । त्यसमाथि एउटा बसले एकजनालाई किचेर क्षतिपूर्ति पनि तिर्नुपरेछ । केही महिना ऋणको सावाँब्याज तिर्न नसकेपछि सजिलो किस्ताको लागि उसको दाजु र तिनै काका भनिनेले साझेदारीमा बस चलाउने सल्लाह सहमति गरेछन् । पारिवारिक सम्बन्ध गाँस्न काकाचाहिँको ड्रग एडिक्ट भएर कैयौं पटक रिह्याबमा बस्दैआउँदै, बस्दैआउँदै गरेको छोरासँग उसको बिहा गरिदिने पनि निधो गरिएछ । बिहे गरेपछि सुध्रिन्छ भनेर उसलाई दबाब आउन थालेछ । पहिला तयार नभएकी आमा पनि पछिपछि त दाइको भनाइमा लागेर बिहे गर न त, सबै ठीक भैहाल्छ भन्न थालिछिन् । अनि केही सीप नलागेपछि ऊ मकहाँ आई ।”
“पहिलादेखि नै तपार्इंहरूको बीचमा केही थियो कि ?”
“त्यस्तो केही थिएन । मलाई म्याथम्याटिक्समा सानैदेखि रहर थियो । तथ्याङ्क शास्त्रमा एमए गरेर केके नै गरेँ भन्ने लागेको थियो, अरु काम पाइनँ, मास्टर बन्न मन लागेन । अनि पुख्र्यौली मोटरसाइकल पार्ट्सको पसलमा नै काम गर्न थालेँ । यो केटी सानैदेखि चिन्थेँ, उमेरमा मभन्दा एक महिनाले जेठी छे । स्कुलसम्म त सँगै पढेका हौं । म लजालु थिएँ । कहिले नजिक भइएन । पछि ऊ एकातिर कलेजमा लागी म अर्कातिर लागेँ । ”
“अनि एकदिन केटी पसलमा आई । देखेसम्म ऊ पनि पहिला त लजालु नै थिई । तर धेरैमा भेटेको, हिम्मतवाली भइछ । उसले गाडीको कुरा सुनाइ, दाइको कुरा सुनाइ, आप्mनो बिहेको कुराले दिएको तनाव सुनाइ । लाजसरम केही नमानी... मैले पहिले भन्नमात्र नसकेकी हुँ, तर अहिले नभने कहिले भन्ने ? म तिमीलाई सुरुदेखि नै मनपराउँथेँ । तिमी पनि मलाई मन पराउ, मलाई भगाउ र आफ्नो स्वास्नी बनाउ भनी ।”
“अनि त्यति भन्दैमा, त्यत्तिकैमा भगाएको ?”
“पहिले त म जिल्लिएँ, के गरुँ के गरुँ भयो । साँच्ची भनुँ भने पहिला म आफैं मलाई खासै मन पर्दैनथ्यो । जताबाट सोचे पनि । पढेर पनि पुख्र्यौली पसलमा बस्नुपरेको पीडा थियो । आप्mनो अस्तित्वप्रति असन्तुष्ट थिएँ । अरुको अगाडि म त केही रहेनछु जस्तो लाग्थ्यो । तर उसले मन पराउँछु भनेपछि भने रमाइलो लाग्यो । उसले माया गर्छु भनेपछि मलाई ऊ पनि मन प¥यो । आहा ! कोही स्पष्ट रूपमा मलाई मन पराएको भन्दैछे । मेरी स्वास्नी बन्न तयार छे भनेर आफैंप्रति गर्व लाग्यो । आपूm आफैंले सोचेजस्तो नालायकचाहिँ होइन रहेछु जस्तो लाग्यो । उसले मेरा लागि लायकको छौ, अहिले जागिर नभए पनि पछि पाइहाल्छौ । भागेर केही समय लुक्नको लागि पुग्ने पैसा छ मसँग । म अहिले तिम्रा घरमा बस्न सक्दिनँ, दाइ बहुलाएर मलाई खोज्दै पहिले तिम्रै घरमा आइपुग्छ । खालि तिमी आफ्नो आमाबाबालाई सम्झाऊ केही दिनको लागि काठमाडौं जान्छु भनेर । पछि मौका हेरेर सबै ठीक भएपछि फर्कौंला भनी । म अन्कनाइरहेको थिएँ । उसले मेरो हात समाती । उसको तातो स्पर्शले मेरो यौवन झन्झनायो । जिब्रो लर्बरायो । तरुनी भएर त ऊ झाँक्रीजत्तिकै जान्ने भैसकेकी रहिछ, मलाई च्याप्प समातेर हठात्मा मेरो ओठमा चुमी, पसलमै । अनि त म लल्याकलुलुक्कै भएँ ! नाइँ भन्नै सकिनँ ।”
मैले असल स्रोताझैं अँअँ भनेर टाउको हल्लाइरहेँ, ऊ भनिरह्यो— “अनि मैले तेरो दाइ त झन् बडीबिल्डर पनि हो, मलाई मार्न बेर छैन भनेँ । उसले मसँग आँखा जुधाइ । लाग्यो, आपूmभित्रको सबै हिम्मत आँखाकै माध्यमबाट मेरो आँखामा घुसाइ र मेरो पुरुषलाई उचाली “केटा मान्छेले अलि आँट गर्नुपर्छ, झन् अप्ठ्यारोमा परेकी तरूनीको समस्यामा त आफ्नै समस्या सम्झेर हिम्मत गर्नुपर्छ । अझ आफूलाई माया गर्ने केटीको इच्छामा र यस्तो विषम समयमा पौरख नदेखाए कस्तो समय देखाउछौ ? मलाई उद्दारकर्ता चाहिएको छ । दाइले बढीमा केही दिन हाम्री आमालाई रीस देखाउँछ र थान्को लाग्छ” भनि । हामी केही दिन लुक्नुछ भनेर योजना सम्झाई । अनि मैले आँट गरेँ केटी कर गर्दैछे, कति डराउनुजस्तो लाग्यो । बालाई पछि मै भनुँला भनेर खुसुक्क आमालाई मात्रै सबै योजना सुनाएँ । आमाले जसोतसो मानिन् । सल्लाहअनुसार पहिला काठमाडौं आएँ र त्यो रातोघरको प्mल्याट भाडामा लिएँ । केही सामान किनेँ । अरु भाँडाकुँडा किन्दै गरुँला भनेर नुवाकोट फर्कें । फर्केको भोलिपल्ट बिहानै हाम्रा मिल्ने तीनतीनजना साथी लिएर नुवाकोट सीडीओ कार्यालयमा गयौं, बिहा दर्ता ग¥यौं र १२ बजेको बस चढेर काठमाडांै हिँड्यौं । बाटोमा बस बिग्रिएर काठमाडांै आइपुग्दा रातै प¥यो ।”
उसको कथा कति बाँकी थियो कुन्नि, अर्डरअनुसारको ब्रेकफास्ट आइपुग्यो । ऊ कफीको प्लेटले कप छोपेर कागजको बट्टामा स्वास्नीको लागि ब्रेकफास्ट लिएर गयो ।
म मूर्तिवत् ऊ गएको हेरिरहेँ ।
म्यानेजर दौडँदै आएर सोध्यो—“कपप्लेट पनि लग्यो त ? किन लैजान दिएको ?”
“अँ, स्वास्नीको लागि ब्रेकफास्ट रे ।” मैले जानकारी दिएँ ।
“किन कोठामा ? यहाँ किन नआएकी ?” उसले फेरि सोध्यो ।
मैले भर्खरै सुनेको कथाको बेलिविस्तार लगाएँ । म्यानेजर अनुहार खुम्च्याएर सुनिरह्योे ।
“कपप्लेट नै चाहिँ लैजान दिनुभएन ।” सारा बयान सुनिसकेपछि म्यानेजरले भन्यो ।
“यी ब्रेकफास्ट र सामानको डिपोजिट भनेर पैसा छोडेर गएको छ । काउन्टरमा गएर तिर्नु भनेको बिल चाहिएन रे, बिल नै नचाहिएपछि काउन्टरसम्म किन जानु रे ।” मैले उसले छोडेको हातको नगद देखाएँ । हिमालको फोटो अङ्कित हजारहजारको दुइटा नोट थियो ।
म्यानेजर मसँग नोट लिएर क्यास काउन्टरतिर गयो । म भनेँ बिस्तारै रेस्टुराँको झ्यालतिर गएँ र सडकपारिको त्यो रातोघरको दोस्रोतल्लाको झ्यालमा हेर्न थालेँ । आधा पर्दा लगाएकाले झ्यालभित्रको कोठामा पूरै त होइन केहीकेही देखियो । खाटमा केटी अझै पल्टिरहेकी जस्ती देखिन्थी ।
हातमा ब्रेकफास्ट बोकेको केटो भने छिटोछिटो सडक पार गर्दै रातो घरतिर लम्किरहेको थियो ।
मैले घडी हेरेँ, बिहानको सवा नौ बजेको थियो ।
दिउँसो एकबजे केटो फेरि आयो । लन्चको लागि । मासुबिनाको थकाली खाना खायो र कोठामा लैजान त्यस्तै खाना अर्डर ग¥यो ।
“बिहान लगेको कपप्लेट त ?” मैले सम्झाएँ ।
“उसलाई सञ्चो भएन, चियानास्ता केही खाइन, बाँकी नै छ । पैसा छोडेकै थिएँ त... ल खाना र थालकचौराको पनि पैसा ।” उसले पाँच हजार मेरो हातमा राखिदियो र एउटा चरेसको थालले खानाको अर्को थाल छोपेर लिएर हिँड्यो, साथमा फेरि दुई बोतल पानी । जाँदाजाँदै भन्दै थियो— “पैसा नपुगे पछि आउँदा दिउँला, बढी भए फिर्ता चाहिएन, तपाईंलाई नै भयो ।”
एक घण्टापछि ऊ फेरि बिहान लगेको कपप्लेट, थालकचौरा र चम्चा लिएर आयो । रेस्टुराँमा लन्च समय सकिएको थियो र कुनै ग्राहक थिएनन् ।
उसले बार एरियामा बसेर एक लार्ज पेग भोड्का मगायो— “उसको इन्जुरीमा अब मलाई पनि अलिअलि इन्जुरी चाहियो, हेल्थ इन्जुरी ।”
उसले चेस मगायो र मलाई पनि खेल्न भन्यो— “कोसँग खेल्नु अब ।”
खाली समय थियो । हामीले तीन गेम चेस खेल्यौं र ऊ तीनैपटक हा¥यो ।
“दुःख पाउन सुरुमात्र गर्नुपर्छ, यस्तो जाबो प्लास्टिकको गट्टीले पनि साथ दिँदैन जिन्दगीमा । एकपटक त जानीजानी हारीदिएको भए पनि हुन्थ्यो नि तपाईंले ।” उसले भन्यो र खल्तीबाट जर्दा पराग निकालेर पूरै पाकेट मुखमा हाल्यो । एउटा मोर मिन्थल सल्कायो र पैसा तिरेर हिँड्यो ।
चार बजेतिर फेरि आयो ।
“कति छट्पट् गर्छ केटो ?” त्यस्तै लाग्यो मलाई र सोधेँ— “किन ? ठीक भएन स्वास्नीलाई ?”
“छैन ।” उसले यत्ति भन्यो र एक पाकेट चुरोट मागेर एक खिल्ली सल्कायो ।
“अनि खाना त पूरै सकिएको थियो त !”
“खाइन, चिसो भयो भनेर फालिदिएँ ।”
“अब के ल्याऊँ ? चिया–कफी ?”
“होइन ।” ऊ उठेर अक्सिजन पार्लरतिर लाग्यो— “अक्सिजन, अब आफैंले तानेको अक्सिजनले मात्र पुग्छजस्तो लाग्दैन मलाई ।”
उसले आँखा चिम्लेर ३० मिनेटको आक्वा प्mलेभर अक्सिजन लियो र हिँड्यो ।
साँझतिर बाहिर सडकमा साइरनको तिखो र नमीठो आवाज आयो । म झ्यालनिरै थिएँ, तल सडकतिर हेरेँ । एम्बुलेन्स आएको रहेछ । एकैछिनमा थाहा पाएँ, एम्बुलेन्स रातोघरकै लागि रहेछ र उसकै बिरामी भनिएकी स्वास्नीको लागि रहेछ ।
एकछिनमा एम्बुलेन्स बिरामी लिएर गयो ।
त्यसको दुईदिन केटो रेस्टुराँमा देखिएन ।
एकरात झममmम पानी परिरहेको थियो । साँझदेखि परेको पानीको कारण सबै पसलहरू बन्द भैसकेका थिए । सडकमा ढल उम्लिएर पेटीसम्म पुगेको थियो । रेस्टुराँ बन्द गर्ने समय भए पनि दुईचार मिनेटमा पानी रोकिएला कि भनेर स्टाफहरू पर्खिरहेका थिए र जानीजानी स्टाफ रिफ्रेसमेन्टको समय बढाइरहेका थिए ।
मैले घर जानको लागि पर्दैगरेको पानीको अनुमान लगाउन झ्यालबाट हेरेँ । ठीक त्यति नै बेला एउटा सेतो रङ्गको एम्बुलेन्स रातोघर अगाडि रोकियो । साइरनको आवाजबिना ।
केटो एम्बुलेन्सबाट ओर्लिएको देखेँ । एम्बुलेन्सको ड्राइभर हुनुपर्छ, ऊ पनि ओर्लियो । केटोले ड्राइभरसँग छलफल ग¥यो । एकछिनमा दुवै मिलेर भिज्दैभिज्दै बिरामीलाई जसोतसो घरमा हुले ।
बिहे गरेर आएको दिनजस्तै फेरि आज पनि केही खान आउने हो कि जस्तो लाग्यो मलाई । तर केटो आएन । आफ्नै कोठामा यताउता केके गरिरह्यो ।
त्यसको भोलिपल्ट दिउँसोमात्र आयो र अक्सिजन पार्लरतिर बसेर अह्रायो— “लेमनग्रास प्mलेभर अक्सिजन, ३० मिनेटको ।” अस्पतालमा बिरामी स्वास्नीको कुरुवा बसेर ऊ आफैं निक्कै गलेको जस्तो देखिन्थ्यो । आँखामुन्तिरको भाग धस्सिएर कालोकालो भएको थियो ।
अर्की वेटरले लगिदिई, उसले मलाई नै बोलायो ।
“मेरो अगाडि बसिराख्नुस्, मलाई अरुसँग नमज्जा लाग्छ । बरू त्यसरी अगाडि बस्नुको पनि चार्ज लिनुस् ।” उसले मेरो हात समायो । उसले सीमा मिचेको सम्झेर मलाई ठीक लागेन । वरपर हेरेँ, सबै आआफ्ना धुनमा थिए, कसैले देखेनन् ।
“मलाई नछुनुस् त !” रुखो आवाज बनाएर भनेँ ।
“किन ? भर्खरैमात्र रङ्ग लगाएको छ र सुकेको छैन ?” ऊ विवादको मुडमा थियो ।
“यहाँ मेनुमा जे छ, त्यहीमात्रै छ ।”
“मेनुमा त तपाईंको नाम छैन । तर तपाईं हुनुहुन्छ । ढुक्क हुनुहोस् मेरो नियतबाट, तपाईं सुरक्षित हुनुहुन्छ ।”
ऊ आफैंले अक्सिजन क्यानुला नाकमा राखेर बस्यो । मैले उसको निद्रा नपुगेको जस्तो आँखा रसाउँदैरसाउँदै टिलपिल हुँदैगएको देखेँ । मलाई अचानक दया हो कि माया हो, लाग्यो । मैले मन दुखाइदिएँ कि जस्तो पनि लाग्यो । यो त बिहेकै दिनदेखि स्वास्नी बिरामी परेर पिरोलिएको मान्छे भन्ने याद आयो र विस्तारै कोमल आवाजमा सोधेँ— “आँखा चुहिन लाग्यो त, किन के भयो ? ठीक भएन अझै ? अस्ति एम्बुलेन्समा गएको देखेको हिजो राति फेरि फर्केको देखेको ।”
उसले हत्पत् आँखा पुछ्यो र झस्किँदै घाँटी बसेर खस्खसाएको जस्तो आवाजमा सोध्यो —“अनि अरु केके देखेको ?”
“यही देखेँ कि अस्ति जसरी एम्बुलेन्समा अस्पताल लैजानुभयो, हिजो राति पानी परिरहेको बेला त्यसैगरी एम्बुलेन्समा बिरामी फिर्ता ल्याउनुभयो । अहिले कस्तो छ ? के भन्छ त डाक्टर ?”
उसले लामो सास फे¥यो र ओठ लेप्रायो— “खोई, डाक्टरले के भन्नु ? उसले भरोसा र विश्वास त मलाई गरेकी हो । अनि मैले पनि के गर्नु खै ! अस्पताल लग्यो, ल्यायो ।”
उसले एकैछिनमा कुरा अन्तै लग्यो— “मेरो दिमाग पनि थाकेको छ, शरीर पनि थाकेको छ । आत्मा कुन्नि कुन ठाउँमा हुन्छ, जहाँ होस्, त्यो पनि थाकेको छ । मलाई अलिकति सान्त्वना चाहिएको छ, यता बसेर विस्तारै टाउको मुसारिदिनुस् न प्लिज, मेनुमा त छैन... बरु त्यसको पनि चार्ज लिनुहोला ।”
“जेको पनि चार्ज भन्नुहुन्छ, जे पनि पाइन्छ पैसामा ?”
“सरी ।” उसले फेरि मेरो हात समात्यो । यसपालि वरपरका मेरा सहकर्मीले पनि देखे । सबैले मलाई हेरे र रोक्नको लागि अगाडि बढे । मलाईचाहिँ ‘नाइँ’ भन्न मन लागेन । सबैलाई ठीक छ, पर्र्दैन भन्ने इशारा गरेँ ।
ऊसँग चेस खेलेदेखि ऊप्रतिको मेरो लगाव के हो मलाई थाहा छैन, तर ऊ खराब नै चाहिँ होइन भन्ने लागेको थियो । उसले पहिलो पटक छुँदा नराम्रो लागेको थियो मलाई, अब नराम्रो लागेन । उसको दुःख अनुभूत गर्दाचाहीँ मानसिक तनावले विचलित भएको बेला सबैको यस्तै होला भन्ने सोचेँ र ऊ बसेको सोफा पछाडि उभिएर विस्तारै उसको टाउको मुसारिदिन थालेँ । अचम्म ! एकछिनमा ऊ निदायो । साँच्ची नै माया लाग्यो, निदाउन दिएँ । निदाएको हेरेरै पनि हल्का मुसारिरहेँ ।
समयमा अक्सिजन सकियो र ऊ आफैं ब्यूँझियो ।
अक्सिजनको क्यानुला निकालेर उसले चुपचाप एक कफी खायो, धन्यवाद भनेर एकपटक अँगालो मा¥यो र गयो ।
मरिजाऊँ, उसको अँगालोमा कुनै स्वार्थ छ जस्तो पटक्कै लागेन । चाँडै गयो, नत्र अँगालो मारुञ्जेल सुम्सुम्याइदिन्थेँ जस्तो लाग्यो ।
अर्को दिन ।
दिनभरि बेपत्ता भएर ऊ साँझको बत्ती बलिसकेपछि आयो र बार एरियाको टेबलमा बस्यो । सपिङ गरेर आएको रहेछ, पोलिथिनको झोला पनि थियो हातमा, टेबलमाथि राख्यो । झोलामा रातो रिबन, क्लिप, काँटा, नेलपोलिस, लिपिस्टिकहरू थिए । एउटा फुलबुट्टे सारी पनि थियो ।
ऊभन्दा म बढी सहज भैसकेको थिएँ । सोधेँ— “क्या हो, आज त शृङ्गारका सामानहरू छन् नि, केही विशेष छ कि ?”
“उसको बर्थ डे हो आज ।”
“ए, मेरो तर्फबाट पनि हेप्पी बर्थ डे ल । खाना खाएको हो ?”
“उसको तर्फबाट धन्यवाद । खाना अघि नै खाइसकेँ ।”
“अब के त ?”
भन्यो— “हेल्थ इन्जुरी दिनुस !”
“सबै एकसाथ !”
उसले मात्रा जानेर एक लार्ज पेग भोड्का, ब्राण्ड जानेर एकखिल्ली मोर मिन्थल चुरोट ल्याइदिई । उसले चुरोटको सिङ्गै बट्टा माग्यो ।
उसले बिस्तारैबिस्तारै चुस्की लगायो र १५ मिनेटजतिमा सिध्यायो । त्यसपछि खल्तीबाट जर्दा पराग निकाल्यो, खोल्यो र सिङ्गै पाकेट मुखमा हालेर देब्रे गालामा च्याप्यो । अनि बैजनी रङ्गको पाँच इन्च लामो मोर मिन्थल सल्काएर स्वाँऽऽ आवाज आउनेगरी लामो सर्को तान्यो । पक्कै पनि निकोटिनयुक्त मिन्थल धुवाँ आत्माको भित्री तहसम्म पु¥याउन चाहन्थ्यो ।
चुरोटको खरानी रङ्गको धूवाँ फूऽऽ गरेर उसले चुरोट समातेकै हातले देब्रे आँखीभौं मुसा¥यो— “चेस ल्याउनुस् न ।”
मैले लगिदिएँ । उसले चेस बोर्ड बिछ्यायो, गट्टी मिलायो र एक्लै चेस खेल्न थाल्यो— “तपाईं जानुस् । यसरी हेरेर बस्दा म नर्भस हुन्छु र नर्भस हुँदा जिन्दगी मात्रै खराब हुदैन, खेल पनि बिग्रिन्छ । आज एक्लै खेल्छु । तपाईंलाई थाहा छ चेसमा कि सेतो हार्छ कि कालो, तर एक्लै खेल्दा हर हालतमा जित्नेचाहिँ मै हुन्छु । तपाईंसँग खेल्दा कहिले जित्नु ?”
म अलि टाढा गएँ, तर खेल हेरेरै बसेँ ।
एकपटक सेतो हा¥यो, ऊ थारै रोयो र फेरि गट्टी मिलायो । अर्कोपटक कालो हा¥यो, तैपनि रोयो र अर्को खिल्ली चुरोट सल्कायो । अनि एउटा भेज मम, एउटा भेज पिज्जा होम प्याक गर्न लगायो, दुइटा डाइट कोकको क्यान लियो र आफ्नो खरिददारीको झोला लिएर हिँड्यो ।
बानीजस्तै परिसकेको थियो । म चियो गर्न झ्यालमा पुगेँ । उसले उफ्रिएर ढल नाघ्यो र घरभित्र पस्यो । एकछिनमा उसको कोठाको बत्ती बल्यो । एकछिनमा पर्दा उघ्रियो ।
उसकी स्वास्नी खाटमा सुतेकी थिई ।
मैले देखेँ— उसले स्वास्नीलाई नउठाइकन, सुतेको सुत्यैमा कपाल मिलाइदियो । केहीबेर गाला मुसारेर झोलाबाट सारी निकाल्यो र ओढाइदियो ।
सोचेँ —“सारी लगाउन त उठ्न पनि सक्नुप¥यो नि ।”
“ओह्, हाउ स्विट ।” ऊ त हातमा नेलपालिस पनि लगाइदिन थाल्यो । हातमा सकिएपछि खुट्टामा पनि लगाइदियो । ओठमा लिपिस्टिक लगाइदियो ।
बिरामी न थिई, स्वास्नी सुतिरही । जेजे गर्छ, गर्न दिइरही । सायद उसैले अब यसो गर्ने उसो गर्ने भन्ने इच्छा बताइरहेकी हुँदी हो ।
“बिचरा ।” मैले मनमनै भनेँ र झ्यालबाट हेर्न छोडेर काममा फर्किएँ । सत्यसत्य, एकाएक ऊप्रति आदर जाग्यो ।
केहीदिन पटकपटक फरकफरक समयमा ऊ रेस्टुराँमा आउँदैजाँदै गरिरह्यो ।
एकदिन रेस्टुराँमा पस्दा उसको झोलामा बेगन स्प्रे थियो । पफर््युम थियो । रूम फ्रेसनर थियो । केही मुखमा लगाउने डस्टमास्क थिए । एक पाकेट अगरबत्ती पनि थियो ।
मैले झोला हेरेको देखेर उसले ब्याख्या ग¥यो— “अस्ति किनेको सकियो त्यसैले फेरि किनेको । ढल पनि कहिले बनिसक्ने भएन । गन्हाएर उधुम हुन्छ । हावा चल्दा झन् गन्हाउछ । रूम फ्रेसनर हाल्यो भने अलि अर्कै गन्ध आउँछ, त्यो पनि त गन्धै हो नि आँखिर ! थरिथरिका कीराले दिक्क भैसकेँ । बेगन स्प्रे पनि बेलाबेला हाल्छु । कुनै बेला त सबै गन्ध मिसिएर महागन्ध आउँछ ।” उसले केही सम्झेझैं गरी खल्तीबाट सानो पफर््युमको सिसी निकाल्यो र अलिकति पफर््युम हरर्र बास्ना आउनेगरी जँुगामा दल्यो ।
“अहिले कस्तो छ बिरामीलाई ?” सोधेँ ।
ऊ केही नबोली यताउति हेरिरह्यो ।
उसको मौनतामा ऊ भित्रभित्रै केही घटनाको पछाडि दौडेको चाल पाउन सकिन्थ्यो ।
“खाना खाने ?”
“अनि ? हेल्थ इन्जुरी ?”
“अक्जिसन लिने ?”
“अनि किन आएको त ? जानुस् ।”
“आच्या ।” ऊ लज्जित भयो— “कोठामा भनेर कहाँ आइपुगेँ ? दिमाग खराब ।” ऊ भुत्भुतायो र बाहिर निस्कियो ।
एकछिनमा मैले झ्यालबाट तल सडकमा ऊ जाँदै गरेको देखेँ । उसले सिमेन्टको स्ल्याबमा टेकेर पेटीमा जानुको साटो आज पनि उफ्रेर ढल नाघ्यो र हुत्तिएर घरभित्र पस्यो । एकछिनमा ऊ कोठाभित्र देखियो । स्वास्नी भएको खाटनेर उभियो । एकछिन कुरा ग¥यो, सायद तत्कालको सञ्चोबिसञ्चो सोध्यो । फेरि झुकेर केही कुरा ग¥यो, सायद भोकप्यास सोध्यो ।
एकछिनमा बेगन स्प्रे छरेको जस्तो देखियो । फेरि रूम फ्रेसनर छरेको जस्तो देखियो । बेगन स्प्रे र रुम फ्रेसनरको कक्टेल गन्ध कस्तो होला कुन्नि, घरीघरी हत्केलाले नाक हम्केको पनि देखियो । के तालको मान्छे, रुम फ्रेसनरपछि अगरबत्ती किन चाहियो ?
अर्कोदिन मैले मिस गर्नैपर्ने गरी ऊ रेस्टुराँमा नै आएन ।
साँझ करिब सात बजेतिर साइरनको आवाज आयो । चासो जाग्यो । फेरि बिरामी भइछ भन्दै म झ्यालबाट हेर्न गएँ ।
साइरन एम्बुलेन्सको होइन रहेछ, पुलिसको भ्यानको रहेछ ।
एउटा होइन, दुइटा भ्यान थियो पुलिसको । एकैछिनमा सडकमा भीड जम्मा भयो । पुलिसहरू कोही घरभित्र छिरे, कोही बाहिरै बसे । एकछिनमा पुलिसले हथकडी लगाएर उसलाई गलहत्याउँदै बाहिर निकाल्यो र भ्यानमा हाल्यो । फेरि एकछिनपछि अस्ति नै रेस्टुराँँमा बर्थडेको लागि भनेर ल्याएको फुलबुट्टे सारीमा बेरिएको एउटा डल्लो निकालियो । भीडमा सबैजना दुर्गन्धले नाक थुनेका देखिन्थे । करिब आधा घण्टाजतिमा पुलिसका दुवै भ्यान केटो र सारीको पोको लिएर हिँड्यो । पछि त्यही भीडमा उभिएर सबै घटना थाहा पाएको एक ग्राहक रेस्टुराँमा आयो र सुनायो— “केटोले भगाएर ल्याएकी केटी रे । कुन्नि कहिले मरिसकेकी रहिछे । लास गलेर लित्तिपित्ती भैसकेको रहेछ । मुछेको माटो उठाएसरी साबेल लगाएर कुहिइसकेको लास उठाउनुपरेको छ्या ! बल्लबल्ल गार्बेज ब्यागमा कुहिएको लासको थुप्रो उठाएर, उसैलाई छोपिएको सारीमा पोको पारेर लगे । डेन्जरको अपराधी रैछ केटो !”
उसले ४० मिनेटको अक्सिजन लिँदै गर्दासम्म मैले ऊसँग जोडिएका यथासम्भव घटनाहरू सम्झिन भ्याएँ ।
ऊ अझै अक्सिजन लिँदैथियो । म बिस्तारै उसको अगाडि गएँ । उसले आँखा खोल्यो र मलाई देखेर सँगै बस्न इशारा ग¥यो । म गएर ऊसँगै सोफामा बसेँ र अक्सिजन सकिने समय कुर्न थालेँ ।
अक्सिजन सकिएपछि ऊ निक्कै फ्रेस देखियो र आफैंले पाइप तह लगायो । मैले सत्यतथ्य थाहा पाउन झट्पट सोधेँ— “केहीकेही त थाहा छ, खासमा के भएको थियो ?”
ऊ पनि घटना सुनाउन उत्तिकै हतारोमा रहेछ । भन्यो— “त्यो पहिलो रात खाना खाएपछि पहिला मैले नुहाएँ । ऊ मपछि नुहाउन बाथरुममा छिरेकी थिई, बाहिर निस्किँदा चिप्लिएर ढोकैमा लडी । रुमालमात्र बेरेकी थिई र रुमालभित्र नाङ्गै थिई । लुगा लगाइदिएँ । केहीबेरको बेहोसीबाट होस खुलेपछि सोधपुछ गरेँ, हस्पिटल जाऊँ भनेँ । नजाने, ठीक हुन्छ भनी । ब्लड प्रेसरको औषधि नखाएको दुई दिन भैसकेको रहेछ । दौडादौडमा औषधि पनि ल्याउन बिर्सिछ । किनेर ल्याउँछु भन्दा यति राति पर्दैन होस्, भोलि खाउँला भनी । उसलाई दाइ खोज्न आएर भेट्टाउला भन्ने डर थियो, ऊ केहीदिन कतै ननिस्किई गुप्तबास नै बस्न चाहन्थी । उसलाई कसैले चिनेर दाइलाई बोलाइदिन्छ कि भन्ने शङ्का थियो ।
रातभरमा तीनपटक भोमिट गरी । केही सुतेको जस्तो, केही बेहोसजस्तो उसले रातभर मलाई द्विविधामा पारिरही । म पनि बिरामी कुरेझैं कहिले आधा निदाउँदै कहिले झप्काउँदै उसको हेरबिचार गरिरहेँ ।
बिहान ब्रेकफास्ट खाएँ, उसले केही पनि खाइन । दिनभर एउटै पोजिसनमा सुतेको जस्तो, कहिले ब्यूँझिएको जस्तो, कहिले बेहोस भएको जस्तो गरिरही ।
साँझ स्थिति बिग्रियो, हिरिक्कहिरिक्क गर्न थाली । सास फेर्न गाहो भएको र टाउको दःुखेको गुनासो गरी । ऊ नाइँ भन्ने अवस्थामा थिइन, एम्बुलेन्स बोलाएँ र हस्पिटल लगेँ । त्यहाँ सलाइन दिइयो, कुन्नि केके जाँचे । केही घण्टामा उसले ठीक भएको र घर जाने भनेर जिद्दी गरी । ऊ सम्भवतः सकेसम्म त्यहाँबाट भागेर कोठामा गुप्तबासमा जान चाहन्थी ।
दुई दिनपछि फलोअपमा जानेगरी कोठामा फिर्ता ल्याएँ । एक पोको औषधि थियो । समयसमयमा खान दिएँ । खाना पटक्कै खाइन । खालि पेटमा औषधि खायो कि भोमिट गर्थी । पछि त भोमिट आउँछ भनेर पानी पनि खान मानिन ।
पछि निधार रन्किने गरी ज्वरो आयो । टाउको दुःखेअनुसार ब्लड प्रेसर बढेछ भन्ने अनुमान लगाएँ र उकुसमुकुस भएर घरभित्र–घरबाहिर गरिरहेँ । मलाई नै याद छैन कति पटक उसलाई कोठामा छोडेर निस्किएँ ।
एकदिन बोल्न छाडी र उसको हलचल पनि बन्द थियो । छोएँ, चलाएँ, घच्घच्याएँ । होस खुलेन । फेरि एम्बुलेन्स बोलाएर हस्पिटल लगेँ । डाक्टरले अस्पताल पु¥याउनुअघि नै मृत्यु भएको भनेर घोषणा गरिदियो । अनि समस्या प¥यो । अस्पतालको पुलिसले तत्काल केरकार गर्न थाल्यो, को हो, कसरी मृत्यु भयो भनेर । मैले सबै जस्ताको तस्तै भनिदिएँ र नपत्याए पोस्टमार्टम गर्न भनेँ । साँच्चीकै पोस्टमार्टम गरियो । ‘डेथ बाई कार्डिएक अरेस्ट’को रिपोर्ट लिएँ । अन्तिम संस्कार गर्न त्यतिबेला सजिलो थिएन, उसका मान्छे, त्यसमा पनि दाइलगायतलाई खबर गरिदिनुप¥यो । घाट नलगी कोठामै ल्याउनु उचित ठानेँ । सोचेँ, रात बितोस्, अनि भोलि विचार गरुँला ।
घर आइपुग्दा झमझम पानी परेको थियो । शववाहनको ड्राइभर नाइँनाइँ भन्दै थियो, बिस्तारै उचालेर कोठासम्म पु¥याउन मद्दत गर, पाँचहजार दिन्छु भनेँ, मान्यो । माथिसम्म लैजान मद्दत गरेर उसले ठूलो गुन लगाएको थियो, दिन्छु भनेको भन्दा दुईहजार बढी दिएँ । बिरामी स्वास्नीलाई अस्पताल लिएर गएको थिएँ, फर्किंदा कोठामा लास थियो । भगाउनुअगाडि एकपटक चुम्मा खाएको स्वास्नीको लास । बिहे गरे पनि स्वास्नी भन्न नपाएको स्वास्नीको लास ।”
उसको बयान सुनेर मैले आफ्नो ज्ञानलाई थुकेँ— “थुक्क मेरो बुद्धि, शववाहन र एम्बुलेन्स पनि छुट्याउन नसक्ने म, लास पो ओरालिएको रहेछ त्यो दिन शववाहनबाट । ”
ऊ भन्दै थियो— “के गरुँ, के नगरुँ भन्ने उकुसमुकुसमा उसैलाई हेरेको हे¥यै रात काटेँ । ब्यूँझिन्छे कि जस्तो लागिरह्यो । साँच्ची भनुँ भने अहिले पनि मरेकी छैन कि जस्तो लाग्दैछ । यहीँ छ कि मेरो कुरा सुनिरहेकी जस्तो लाग्दैछ । फर्केर कोठामा गएर फेरि अस्पताल कुदाउनुपर्ने हो कि, या तुरुन्तै नकुहियोस् भनेर फेरि बेगन स्प्रे छर्नुपर्ने हो कि जस्तो पनि लाग्दैछ । एकैपटक केके केके लाग्दैछ । मलाई सहानुभूति दिएर अलि सुम्सुम्याइदिनुस् न, सुम्सुम्याइराख्नुस् न !” उसले आँखा चिम्लियो ।
मैले सुम्सुम्याउन थालेँ । म्यानेजर कुन्नि कतिखेरदेखि पछाडि उभिएर सुन्दै थियो उसको बयान, उसको पनि अनुहार निन्याउरो देखिन्थ्यो । पहिलोपटक त्यो मान्छेप्रति सहानुभूति उम्लिएको थियो उसको र उसले पनि इशारामा ‘सुम्सुम्याइराख’ भन्यो ।
मैले फेरि सोधेँ— “त्यसो भए, उसको बर्थडे भनेर प्लास्टिकको ब्यागमा शृङ्गारको सामान किनेर आउँदा मरिसकेकी थिई ?”
“अघिल्लो दिन नै मरिसकेकी थिई नि ।” ऊ फेरि बयान गर्न थाल्यो— “मरेको भोलिपल्ट उसको बर्थडे थियो । बर्थडेमा केको घाट लानुजस्तो लाग्यो । मरे पनि बर्थडे त हो नि जस्तो लाग्यो । बजार गएर उसको लागि शृङ्गारको सामानहरू किनेँ । उसलाई आफ्नै हातले शृङ्गार गरिदिए । जे गरेँ, साँच्चै मायाले गरेँ । ”
“अनि बेगन स्प्रे ? रुम फ्रेसनर ?”
“केही दिनपछि ऊ कुहिन थालेकी थिई, गन्हाउन थालेकी थिई । बाहिरको ढलको गन्धले गर्दा कुन उसको गन्ध हो कुन ढलको गन्ध, छुट्याउन गाह्रो थियो । तर कोठामा चाहिँ सबैखाले गन्ध मिस्सिएर नर्क बनेको थियो । त्यही गन्धकोे उपचार पफर््युम र धुपले गर्न सकिन्छ कि भनेर कोसिस गरेँ । बेगन स्प्रेले कुहिने क्रम केही ढिलो हुन्छ कि भनेर कोसिस गरेँ । एकसाँझ उसको दाइ पुलिसको सहयोग लिएर आइपुग्यो र जिल्लियो । उसकी बहिनी सग्लो उठाउनै नमिल्नेगरी गलिसकेकी थिई ।”
मलाई पुलिस आउनु र ऊ समातिनुको कुरा थाहा थियो । आपूmले देखेको, सुनेको र भोलिपल्ट पत्रिकामा आएको समाचार जोडेर भनेँ— “अनि पुलिसले मरेर कुहिइसकेको लासलाई उठाउन नसकेर साबेल प्रयोग गर्नुप¥यो । साबेलले उठाउँदै प्लास्टिकको गार्बेज ब्यागमा सोहोरेर निकाल्यो र तपार्इंलाई हथकडी लगाएर लिएर गयो । त्यो दिनको टभिी र भोलिपल्टको पत्रिकामा त्यसैको व्यापक चर्चा थियो ।”
उसले भन्यो— “अनि पुलिस चौकी लगेर सोधपुछ केरकार ग¥यो । बयान लियो । केटी अपहरण गरको भन्ने रहेछ । होइन भनेँ । मसँग विवाहको कागज थियो । मारेको भन्ने दोष लगाए । त्यो पनि होइन बिरामी थिई, आफैं मरी भनेँ । बिरामीको अस्पतालको बिलहरू थियो । पोस्टमार्टम रिपोर्ट थियो । अनि केही गर्न सकेन र धरौटीमा छोडिदियो । त्यत्ति हो कि घाट नलगेर घरमा किन ल्याएँ भन्नेमा पुलिस झन् उत्सुक थियो ।”
“बिहा गर भनी, गरिदिएँ । भगाएर मेरो उद्दार गर, ड्रग एडिक्टसँग विवाह हुनबाट जोगाइदेऊ भनी, भगाइदिएँ । ड्रग एडिक्टचाहिँ उता अझै जिउँदै छ, यो यता खत्तम । आफ्नो इच्छाले यसो गरुँ भनेर गरेको होइन, उसले भन्दा माया लाग्यो, नाइँ भन्न पनि सकिएन । हिरो बन्न खोजेँ । उसको उच्छृङ्खल आँसु र सम्मोहक चुम्बनमा फसेँ र बिहे गरेँ । न सुहागरात भयो न ज्वाइँ बनियो ! मलाई यता ल्याएर ऊ कता गईगई, पुलिस आयो, समायो । पुलिसले भनेको बेला हाजिर हुनुपर्नेगरी तारेखमा छुटेको छु । मुद्दा बाँकी नै छ । तर प्रमाण मेरो पक्षमा छ, मै जित्छु । तर मुद्दा जितेर के जित्छु, योचाहिँ थाहा छैन । यहाँ यसो एकदुई करेन्टको झड्का हान्ने केही व्यवस्था छैन ?”
“हुनुपथ्र्यो नि ।”
ऊ कतै जान ढिलो भएजसरी हठात्मा उठ्यो र रेस्टुराँभित्र पस्दा जुन स्तब्धता दिएको थियो त्यस्तै प्रकारका आङ सिरिङ्ग पार्ने चिसोपना छोडेर बाहिरियो— “अब नुवाकोट जान्छु । घरमा के सोच्दै होलान् । मलाई लाग्छ, मैले पहिले पनि तपाईंलाई कतै देखेको छु ! यो रेस्टुराँ, यहाँको सेटिङ, म्यानेजर, क्यासियर, सबै निकै पहिलेदेखि नै चिनेचिनेझैं लाग्यो । सत्य ।”